စမ်းသပ်ကိရိယာများနှင့်ကိရိယာများထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | China Test Instruments And Tools Factory
အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာ BML205 BML205-1 BML205-10 BML205-20 BML205-25 BML205-30 လှိုင်းအလျား 650nm ± 20nm Output ပါဝါ *> 1mW> 10mW> 20mW> 25mW> 30mW Dynamic Distance **>5km 8 ~ 10 km 15 ~ 17 km ၁၈ ~ ၂၀ ကီလိုမီတာ ၂၅ မှ ၃၀ ကီလိုမီတာ Glint 2Hz Connector *** ၂.၅ မီလီမီတာ (သို့) ၁.၂၅ မီလီမီတာ Universal connector သိုလှောင်ထားသည့်အပူချိန် -20 - +60 ℃၊ <90% RH ၏လည်ပတ်မှုအပူချိန် -10 - +50 ℃ <90% RH Power Supply AA * ၂ အလေးချိန် ...
1. Fiber optic stripper CFS-2 2. KEVLAR Scissor KC-1 3. Cabide Scibe Tool TTK-174A4။ "Tri-Hole" Fiber Optic Stripper TTK-158 5. Fiber Jacket Stripper HW-5026။ Universal Conector Crimp Tool PK-301J 7. Buffer Tube Stripper 45-162 8. Round Cable Jacket Stripper HT-325 9. 400x Universal ဖိုင်ဘာအဏုကြည့်မှန်ဘီလူး 10. 400x Microscope အတွက် 1.25mm adapter 11. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စန္ဒရားဝါယာကြိုး 12. တိကျမှန်ကန်သောကြိုး ဆိပ်ကမ်း Connector ပူမီးဖို 14. အပူမီတာ 15. EPO-TEK 353ND Epoxy 16. Epoxy လျှောက်လွှာ S ကို ...